အစိမ်းရောင်လူသား.... ~ ဒီမိုဝေယံ
ခေတ်သုံးခေတ် .. နှစ်သုံးနှစ်ကို ဖြတ်သန်း ကျွန်တော်ကျော်သူရဲ့ ဘ၀သက်တမ်း။ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ လူ့လောကကြီးထဲရောက်ရှိ။ ပညာရေးကိုမသိ။ စီးပွားရေးကိုမသိ။ ကျန်းမာရေးကိုမသိ။ လူမှုရေးကိုမသိ။ ဘာဆိုဘာမှ မသိကမ္ဘာလောကကြီးထဲရောက်ရှိ။ ကလေးအတွေး ကလေးအသိ ဆော့ကစားချင်တာပဲရှိ။
မိဘတွေ ခံစားမှုကိုမသိ … ကိုယ်လိုချင်တာပဲသိ။
သားသားတို့ကမူလတန်း၊ အလယ်တန်း။ ဟို … အကိုကြီးတွေကတော့ Rasuလို့ခေါ်တဲ့ တက္ကသိုလ်အတန်း။ လူတွေကရှုတ်ရှုတ် … ကျောင်းသားကြီးတွေကတရုတ်ရုတ် … လူထုကြီးကတအုတ်အုတ် … တရုတ် ကုလားတွေက တဖြုတ်ဖြုတ်။ ဘ၀တွေက ဖရိုဖရဲ။
… မီးခိုးမှိုင်းတွေက ဝှေ့ဆဲ။
ငြိမ်းချမ်းမှုတဲ့လား … ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်လား … အဘမှိုင်းတဲ့လား … ဦးသန့်တဲ့လား။ လားပေါင်းများစွာထဲ … နားစည်ထဲမှာ ဝှေ့ဝဲ။ ဘာဆိုဘာမှ မသိခဲ့ … ဘာဘာဘာမှ မသိဘူးတဲ့လား။ သားတို့သိတာ … ကလေးဘ၀ထဲ … စစ်တိုက်တမ်းကစားဖို့ဘဲ။ တိုက်မယ် … ခိုက်မယ် … ပစ်မယ် … ခတ်မယ် … ထိုးမယ် … ကြိတ်မယ် … ဆက်သွယ်ရေးစက်နဲ့ စကားပြောမယ် … လက်ပစ်ဗုံးနဲ့ ပစ်မယ့် ကစားပွဲတွေ၊ ကစားနည်းတွေ။ အမည်နာမကား … စစ်တိုက်တမ်းကစားနည်းတဲ့။
မင်းကဗိုလ်ကြီးဆို … ငါကဗိုလ်မှူး။
မင်းကဗိုလ်မှူးဆို … ငါကဗိုလ်ချုပ်။
နေရာလုတာကစ … ကျားဗိုလ်ဆွဲကြ။
ကစားကြတာများ … Hero တော့ဖြစ်ချင်ကြပါရဲ့။
ဒါ . . . ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ အာဇာနည်တွေအကြောင်း။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည် ချစ်တဲ့အကြောင်း။
ပြည်သူတို့က ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို ချစ်တဲ့အကြောင်း။
အကြောင်း … အကြောင်းပေါင်းစုံကိုအဟောင်းကအသစ်ဖြစ်အောင် စစ်ရာဇ၀င် သမိုင်းစစ်ကိုအမှန်တကယ်အားကျ၊ နှလုံးသားထဲထကြွလာအောင် ပြောပြကြတဲ့ မိဘ၊ ဘိုးဘွားများနှင့် ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး။
ဒါ . . . ကလေးပုံပြင်မဟုတ် … ဒဏ္ဍာရီမဟုတ် … လုပ်ကြံမဟုတ်တဲ့ အဟုတ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်စစ် စစ်စစ်မှန်တဲ့ စစ်သမိုင်းအစစ်။
စစ်ရာဇ၀င်စစ်စစ် သမိုင်းစစ်စစ်ကိုတစ်ဖြစ်ဖြစ်မည်အောင် အားကျလို့မ၀သေး … စစ်တိုက် တမ်းကစားလို့ မပြီးသေး … အဖိုးနဲ့ အဖအင်းစိန်ဆိုတဲ့ ဘ၀တက္ကသိုလ် နံရံကြားရောက်လို့ သွားသလေး။ မိဘ၊ ဘိုးဘွားတို့ရဲ့ ချွေးနည်းစာစစ်စစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်လွန်စက် … အလုပ်ရှင် အလုပ် သမားတပြေးညီရှိရမယ်လို့၊ အမြတ်ကြီးစားအရင်းရှင်တဲ့ … စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကညွှန်ကြား၊ ပစ္စည်းကိုသိမ်းသွား … လူကိုလည်းထိန်းထား။
သြော် . . . ကလေးအတွေးနဲ့တွေးကြည့် … “အစိမ်းရောင် လူသားတွေဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလည်း လုပ်သလား” တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ … လွတ်လပ်ရေးရလို့ မ၀သေး၊ မလွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ထဲ မဆလလူသား ဖြစ်လို့လာ။ မလွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ထဲ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ … ဆီဒင်ကားတွေ မျက်စိရှုပ်လာ။ အခွင့်ထူးခံသားသမီးတွေ မျက်စိနောက်လာ။ ကျောင်းစိမ်းစာအုပ်တွေ မဲဖောက် လို့လာ။ ဒါဟာ … တပြေးညီတဲ့လားဗျာ။ အေးဗျာ . . . အေးရာအေးကြောင်း၊ လူငယ်အတွေး … အဖြေရှာကြည့်။
ကောင်းပါလေစွ … ကောင်းလေစွ။ ယမကာနဲ့ မူးယစ်ဘ၀။
အမှန်တရားတွေပျောက် … သီလတွေဖောက် … ဓါတ်ရှင်ထဲရောက်။
ဟိုလူကြီးနဲ့ဖိုက် … ဟိုသူငယ်မနဲ့ဆိုက်။
ဟိုဘဲကြီးနဲ့တိုက် … ဟိုမဒီကြီးနဲ့ခိုက်။
မှားတာကိုမှန်သလားလို့ စမ်းသပ်ချင်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။
လူစိတ်မပျောက်ခင် … အသိရောက်။
အသိတရားရလို့ … လူလုပ်မယ်ကြံကာရှိသေး … “ ဒို့အရေး ” တဲ့။
ဘာပါလိမ့်လို့ … နားစွင့်ကျ၊ ထကြည့်ကြ၊ စူးစိုက်ကြ၊ အာရုံစိုက်ကြ။ ဟ! . . . ငါတို့ အရေးဘဲ၊ ပြည်သူ့အရေး၊ ဒို့အရေးဘဲ။ ညီလိုက်တဲ့ပြည်သူ၊ ညီလိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ ညီလိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ။ ဟုတ်ပြီဟေ့ ဆိုပြီး … ငါလည်းညီအောင်လိုက်ညှိ … ဒဂုံ (၁) နဲ့ ဆေးရုံကြီးမှာ အများနည်းတူ ပေါက်ပေါက်လိုက်ဖောက်။ အဲဒီနောက်တော့ … ထောက် (၆) ကိုရောက်။ ဒီအချိန်မှာကလေးက နှစ်ယောက်။ မဟေသီကတစ်ယောက်။ လက်တွဲညီသလားမမေးနဲ့ … လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား၊ အယူအဆတွေကွဲပြား … ကိုယ်ကအနုပညာသမား။ သြော် . . . အဲဒီအချိန်မှာလူလတ်အတွေးတွေးကြည့် “အစိမ်းရောင်ဆိုတာဒါမျိုးကြီးလည်းဖန်တီးသားပဲ” လို့။
ဒီလိုနဲ့ … န၀တခေတ်ထဲ လူဖြစ်လို့လာ။ ငိုလိုက် ရယ်လိုက်နဲ့ ဘ၀ရဲ့သားကောင်များကို ထပ်မံ၍ ငိုခိုင်းရယ်ခိုင်းတဲ့ ဓါတ်ရှင်သမိုင်း ရာဇ၀င်ထဲ ဝှေ့လို့ဝဲ။ ဓါတ်ရှင်သမားတို့ကတော့ … ပရိသတ်ပြည်သူကို အကုသိုလ်တွေ ဝေမျှဆဲ။ ဒါနဲ့ … အေးရာအေးကြောင်း၊ ငြိမ်းရာ ငြိမ်းကြောင်းလူလတ်အတွေးနဲ့ အဖြေရှာကြည့်။
ကောင်းပါလေစွ - ကောင်းလေစွ တွေ့ပါပြီတဲ့ … သုဘရာဇာတဲ့။ သုခ … ကျော်သူ၊ ကျော်သူ … သုခကက်ကင်းတဲ့။ ကျေးဇူးရှင် ဘဘဦးသုခရဲ့ စကား … မှန်တာမှ ဒတ်ထိဘဲ။ ကျော်သူ … သချိုင်း၊ သချိုင်း … ကျော်သူ ဒါလည်း ကက်ကင်းဘဲ။ ကက်ကင်းကိုရိုက်၊ ကက်ကင်းကိုဆောင်ကာ … မိဘကိုဒုက္ခပေးခဲ့၊ မိသားစုလေးကို သောကတွေရစေခဲ့၊ ပြည်သူကိုအကုသိုလ် ဝေမျှခဲ့တဲ့ ငါ … ၀ဋ်ကြွေးတွေ ကျေ။ ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေအောင် အနိမ့်ကျဆုံးကုသိုလ်အလုပ်မျိုးသည် မြင့်မြတ်သောသူတို့သာလုပ်နိုင်သည်တဲ့ … ။
ဒီမှာတင် … ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုး ပေးဆပ်မှုတွေတိုး၊ ဘာသာတရားကိုရိုကျိုးခဲ့ရ။
ဟ! . . . ဘာတဲ့တုန်း … နားစွင့်စမ်း၊ မော့ကြည့်စမ်း၊ မေးကြည့်စမ်း၊ မျှော်ကြည့်စမ်း၊ လျှောက်ကြည့်စမ်း။ “လုံးစုံများစွာ သတ္တ၀ါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းငြိမ်းပါစေ၊ ဒေါသခပ်သိမ်း ငြိမ်းပါစေ”တဲ့ … ဟာ ပြည်သူပြည်သားလူသားအားလုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့ အသံတွေပဲ။ မိုးထဲ … လေထဲ … သေနတ်ဆွဲ၍ မဟုတ်။ မိုးထဲ … လေထဲ … ထီးဖိနပ်မဆွဲတဲ့ … သံဃာတော်တွေပဲ။ ဆွမ်းဘယ်လိုများ ဘုန်းပေးကြမလဲလို့ တွေးမိ။
ရိုက်လက်စ ဓါတ်ရှင်ကားတွေ စွန့်ခွာခဲ့ပြီး လှမ်းလိုက်တဲ့ခြေလှမ်း … သံဃာတော်တို့ နားနေရာ ကြေးသွန်းဘုရားကြီးဆီသို့။ ဒီမှာတင် … လက်သီးလက်မောင်းမတန်း … မကြွေးကြော်ခဲ့ဘဲနဲ့ သူ့အလိုလို Auto လင်မယား နှစ်ယောက် ပြည်ထဲရေးရောက်။ ဒါတင်မကသေး … အောင်သပြေထဲလည်းအမြည်းအဖြစ် ခေတ္တခဏရောက်။
သားနဲ့သမီးလည်း … အဝေးကိုရောက်။ သြော် . . . လူကြီးအတွေး … “အစိမ်းရောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးကြီးလဲ စွမ်းဆောင်ပေးသားပဲ” လို့။ ဒီလိုနဲ့ … နအဖလက်ထဲမှာအလုပ်လက်မဲ့ (၁၀၉ ~ ၁၁၀) ဘ၀။ ယခုအချိန်ထိ သုံးနှစ်တိတိစွန်းခဲ့ပြီပေါ့။ ခေတ်သုံးခေတ်ရဲ့ နှစ်သုံးနှစ်မှာ အနုပညာသမားဘ၀ကနေ အရှင်လတ်လတ် သုဘရာဇာ ဘ၀ကို လုံးလုံးရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။ပြည်သူတွေကိုအချိန်ပြည့် ပေးဆပ်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရားတွေကိုအချိန်တိုတိုနဲ့ မြင်တွေ့ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။ သံဝေဂတရားတွေ သိမြင်၊ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ … အစိမ်းရောင် လူသား။ ငြိမ်းချမ်းမှု အဖြူထည်လူသားဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ … အစိမ်းရောင်လူသား။
သာဓု . . . သာဓု . . . သာဓုပါ … အစိမ်းရောင်လူသား။ အသင်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်သိသလို … သိကြပါစေ။ ကျွန်ုပ်ရသလို … ရကြပါစေ။ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့သလို … မြင်တွေ့ကြပါစေ။ ကျွန်ုပ်ပေးဆပ်သလို … ပေးဆပ်နိုင်ကြပါစေလို့ သာကျွန်ုပ်ရဲ့ မွေးနေ့ (၅၁) နှစ်ပြည့်မှစ၍ ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ ကင်းဝေးကြပြီး၊ လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း … ကင်းရှင်းကြပါစေ။ ဒို့မေတ္တာစွမ်းကမ္ဘာလွှမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဟု မေတ္တာပို့သ သစ္စာဆို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရယုံ မှတစ်ပါးအခြားမရှိတော့ချေ။
မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာဥပေက္ခာဖြင့်
ကျော်သူ (၁၉၅၉ ~ ၂၀??)
ကျွန်တော်၏ မွေးနေ့ ၂.၁၁.၅၉ နေ့ အကြို... ရင်တွင်းရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းထုတ်ခြင်း... ဆောင်းပါးမဟုတ်၊ ကဗျာမဟုတ်..။ နှလုံးသားထဲမွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာမှုတို့ ကိုချပြခြင်းသာ ဖြစ်တော့သည်။
ပြည်သူ့ အနုပညာရှင် စစ်စစ်.. အကိုကြီး ကိုကျော်သူရဲ့ လာမယ့် ၂ရက်နေ့မှ ကျရောက်မယ့် ၅၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နှစ် (၁၀၀)တိုင်ပြီး အများအကျိုး.. ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆက်လက် ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်..
တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအား လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ မြန်မာ အမျိုးသားနှစ်ဦးကို မြစ်ကြီးနားခရိုင်တရားရုံးက သေဒဏ်ချမှတ်
ဂီရိ(သို့မဟုတ်) ဒုတိယနာဂစ် ကြေကွဲဖွယ် ဓာတ်ပုံမှတ်တ...
ယနေ့ တောင်ဒဂုံနှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်များမှ အဖွဲ...
ဆရာအောင်သင်း အား စိတ်ကူးများဖြင့် တိုင်ပင်ခြင်း .....
ယနေ့ တာမွေမြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမို...
အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်မှတ်ပုံမတင...
မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား လယ်သမားတို့၏ လူ့အခွင့်အရေး...
ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့ တေဇရဲ့ Air Bagan လေကြောင်းလိုင...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နိုင်ငံရေး မဟာဗျုဟာများ..
၂၇ရက်နေ့က ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ၏ မဲမပေးရေ...
တိုင်းရင်းသား ပအိုဝ်းများနေထိုင်ရာ ပင်းပက်တောင် သံ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ (၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲအား ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၏ကြေငြာချက်အမှတ် ၁၁...
စမ်းချောင်းက မီးထွန်းပွဲ ( မြန်မာပြည် အမှတ်တရ)
သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်များ သဘောထာ...
Burma's 2010 Election: This is NOT Democracy..
အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်သော က...
မုန်တိုင်းပြီးစ ကျောက်ဖြူမြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများ.. (...
မုန်တိုင်းပြီးစ ကျောက်ဖြူမြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများ..
တို့ပြည်ထောင်စု အလံတော်သည်.. ပြည်သူအကျိုးအတွက် မပါ...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ မြန်မာစံတော်ချ...
ကလေးမြို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြေငြာစာတမ်းနှင့် ဇိုမီးအမျ...
ကျောက်ဖြူမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဂီရီမုန်တိုင်းကြောင့် ...
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ- အပိုင်...
"၂၀၁၀ နတ်သဘင် အစည်းအဝေး" (အိန္ဒိယ)
" တို့လျှောက်ရမယ့်လမ်း" အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း (ဂျပန်)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သံလျှင်၊ ကျောက်တန်း...
နအဖ(စစ်အုပ်စု)၏ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်...
ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ ပြောဆိုချက် (မြန်မာပြည်က ...
ဘဝရှင် မင်းတြားကြီးရဲ့ ယတြာအလံသစ်...
ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီလူငယ်များနေ့ နှင့် ၈၈ ကျောင်းသားခေ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ လူဦးရေ ၉၀ ကျော် ...
နအဖ(စစ်အုပ်စု)၏ ရွေးကောက်ပွဲကို ချက်ချင်းဖျက်သိမ်း...
၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ...
မုန်တိုင်းကြားက ယုံကြည်ချက်ခိုင် ကလောင်ကိုင် အကိုေ...
ကိုမင်းကိုနိုင်၏ (၄၈)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် ဒီမိုကရေ...
2010 ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ၊ ဖျက်သိမ်းပစ်၊ နအဖ ပြုလ...
နအဖစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ မတရားဖမ်းဆီး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ.. (အပိုင်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရပ်တည်ရေး တရားဝင်နည်...
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော အရှင်ထာဝရအား မြန်မာ...
ရန်ကုန်က ဖွတ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲပေးနည်း ...
ဆည်တော်ကြီးမှ ရေအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် ခရီး..
မန္တလေး ရေဘေးအတွက် ဘာသာရေး အဖွဲ့များ ဦးဆောင်၍ လူမှု...
ခွေးခြင်္သေ့ နှင့် ကြိုးနီစနစ် (ချစ်စံဝင်း)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ရွှေဝါရောင် အရှင်...
စင်ကာပူရောက် ရွှေမြန်မာများမှ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အမျ...
နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတကာရှိြ...
မန္တလေးမှ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဘဝ.....
စစ်အစိုးရရဲ့ စေတနာနဲ့ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လက...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့ နယ်မှ ကြံ့ဖွတ်အတွက် ဘာသာရေးခ...
မလည်ရှုပ် ဦးအောင်သိန်းလင်း မွှေးတဲ့မီး
အကျဉ်းခံ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗဲလ်ဆုရှင်ကြီး လျိုရှော...
မန္တလေးတိုင်းဆည်တော်လေး ရေဖေါက်လွှတ်မှုကြောင့် ရေလျှံ...
အခုတော့ ရာဇ၀င်ရိုင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ရချေပြီ (သီချင်း...
မမြင်လိုတော့ပါ၊ မကြားလိုတော့ပါ၊ မပြောလိုတော့ပါ...
ပါတီဆယ်ကိုယ်ခွဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ (သီချင်း)
မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ မြန်မာပြည်အတွက် စကား (မြန်မာစာတ...
နန္ဒာသိန်းဇံ နှင့် ကန်ရေခမ်းခြင်း..
၂၀၁၀ အတုယောင် ရွေးကောက်ပွဲသရုပ်ပြပွဲ (ရန်ကုန်)...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ဒု)ဥက္ကဋ္ဌ ဘဘဦးတင်ဦး...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဘဘဦးတင်ဦ...